မန္တလေး Archives - MM Live News
ကားအဝင်အထွက်ရှိသည်ဆိုသော ဒီလို ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ထားတဲ့ အိမ်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရမည်…..
May 19, 2019 MM Live
ယာဉ်မရပ်ရ ဆိုင်းဘုတ်ချထားသည့် အိမ်ပိုင်ရှင်များ အခွန်ဆောင်ရတော့မည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးမြို့တွင် အိမ်ခြံဝင်းများ အရှေ့၌ ယာဉ်မရပ်ဟူသော ဆိုင်ဘုတ်များ ချထားပါက အခွန်ပေးဆောင်ရတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ဒေါက်တာရဲလွင်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ “ငါ့အိမ်ရှေ့ယာဉ်မရပ်ရ။ ယာဉ်အ၀င်အထွက် ရှိသည်။ နေရာမျိုးတွေမှာ သူတို့ကိုအခွန်ဆောင်ခိုင်းမယ်။ အဲဒီမှာ မျဉ်းဝါနဲ့ ဆွဲခိုင်းမယ်။ ဒါတွေက နိုင်ငံတကာမှာ ရှိတဲ့ စံနှုန်းတွေပါ” ဟု ဒေါက်တာရဲလွင်ကပြောသည်။ ယာဉ်မရပ်ရဟူသော ဆိုင်ဘုတ်များအား မန္တလေးမြို့လမ်းမပေါ်ရှိ အိမ်ပိုင်ရှင်များက အများဆုံးထားရှိပြီး ယင်း လာရောက်ရပ်နားလျှင် ရပ်နားသူအား မချေမငံပြောခြင်း၊ မည့်သည့် အခွန်မျှ ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ မိမိတို့ ပိုင်သည့် ပုံစံမျိုး လုပ်ဆောင်နေခြင်းတို့ကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “လမ်းမတွေပေါ်မှာ ယာဉ်မရပ်ရဆိုပြီး ဆိုင်ဘုတ်အနီတွေနဲ့ ကပ်ထားတဲ့နေရာတွေ တော်တော်များတယ်၊ အဲဒီ […]
မန္တလေးမှာ ( ၆ ) ရက်အတွင်း ဓားကိုင်ရမ်းကာသူ ( ၁၀၀ ) ကျော် ဖမ်းမိ …
May 12, 2019 MM Live News
မန္တလေးမှာ ( ၆ ) ရက်အတွင်း ဓားကိုင်ရမ်းကာသူ ( ၁၀၀ ) ကျော် ဖမ်းမိ … မန္တလေးမှာ တုတ်၊ ဓား လက်နက်ကိုင်ရမ်းကားသူတွေကို အသွင်ယူစုံစမ်းဖမ်းဆီးနေပြီး ၆ ရက်အတွင်း လူပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ မန္တလေးတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ် …။ မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာ မေလ ၅ ရက်ကနေ ၁၀ ရက်နေ့အထိ မှုခင်းကျဆင်းရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ အမှုပေါင်း ၈၀၊ တရားခံ ၁၀၇ ယောက်ကို ဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် …။ ဒါကို စီမံချက်နဲ့ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့နဲ့ ညတိုင်းကင်းလှည့်နေတာလို့ တိုင်းမှုခင်း အကူဌာနစိတ် တာဝန်ရှိသူတယောက်က ပြောပါတယ် …။ မေလ ၉ ရက်နေ့ကတော့ […]
အပြည်​ပြည်​ဆိုင်​ရာ​လေဆိပ်​ မန်း​လေး တံတားဦးမြန်မာ့ေ​လ​ကြောင်းလိုင်း ​လေယာဉ်​အဆင်း ဘီးချမရလို့ ဆီ​ဖောက်​ချပီး ဗိုက်​နဲ့ရှပ်​ဆင်းမယ်​လို့သိရအန္တရာယ်​ကင်းကြပါ​စေ ။ Crd… မန္တလေးမှာ အခုဖြစ်တာတဲ့ … လေယာဉ်အဆင်း ရှေ့ဘီး Nose Landing Gearချမရလို့ဖြစ်တာ … Video လူထိခိုက်မှုမရှိ။ လေယာဉ်မှုးကြီး သိပ်တော်ပါတယ်။ လေယာဉ်ပျက် တဲ့ထဲမှာ ကိုယ်ပါဝင်ဘူးခဲပြီဘဝမှာအမှတ်တရ အဖြစ် ထာဝရမမေ့နိုင်တော့ပြီ ခုဖြစ်နေတာပါအသက်အန္တရယ်ဘေးကင်းခဲ့ပါပြီ Nay Min အပွညျ​ပွညျ​ဆိုငျ​ရာ​လဆေိပျ​ မနျး​လေး တံတားဦးမွနျမာ့ေ​လ​ကွောငျးလိုငျး ​လယောဉျ​အဆငျး ဘီးခမြရလို့ ဆီ​ဖောကျ​ခပြီး ဗိုကျ​နဲ့ရှပျ​ဆငျးမယျ​လို့သိရအန်တရာယျ​ကငျးကွပါ​စေ ။ Crd… မန်တလေးမှာ အခုဖွဈတာတဲ့ … လယောဉျအဆငျး ရှဘေီ့း Nose Landing Gearခမြရလို့ဖွဈတာ … လူထိခိုကျမှုမရှိ။ လယောဉျမှုးကွီး သိပျတျောပါတယျ။ လယောဉျပကျြ တဲ့ထဲမှာ ကိုယျပါဝငျဘူးခဲပွီဘဝမှာအမှတျတရ အဖွဈ […]
မန္တလေး NIMI Drink japan ဆိုင်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်လူ (၆)ဦးက မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်စွာဖျက်စီးပြီး ခြိမ်းခြောက်စာ ကပ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်…
မန္တလေးက NIMI Drink japan ဆိုင်ကို မျက်နှာဖုံးစွပ်လူ (၆)ဦးက ဝင်ရောက်ဖျက်စီးပြီး ခြိမ်းခြောက်စာ ကပ်သွားမှု ည၉နာရီ၁၀မိနစ်အချိန်တွင် မျက်နာဖုံးစွတ်ထားသော လူ၆ယောက် လူတစ်စုမှာ ဆိုင်အတွင်းရှိသောပစ္စည်းများကို ရိုက်ခွဲပြီး ချိန်းခြောက်စာများကို ဆိုင် နံရံတွင်ကပ်သွားပါသည်။ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်စွာဖျက်​စီးသွားမှူများကို ဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရသည်။ ref အမှန်​တရားဘက်​​တော်​သားများအုပ်​စု #ခရီးသည် အိုဘယ့်​မြန်​မာပြည်​ မန်း​လေးမြို့ မှာရှိတဲ့ NIMI Drink japan ဆိုင်​ကို မျက်​နှာဖုံးစွပ်​လူ​ခြောက်​​ယောက်​မှာ ရိုက်​ခွဲဖျက်​စီးခြိမ်း​ခြောက်​မှူဖြစ်​ ၀၁၉-၄-၂၆, ည၉နာရီ၁၀မိနစ်အချိန် တွင် မျက်နာဖုံးစွတ် ထားသော လူ၆ယောက် ရှိသောလူတစ် စုမှာ ဆိုင်အတွင်းရှိသော ပစ္စည်းများကိုရိုက် ခွဲပြီး ချိန်းခြောက်စာများကို ဆိုင် နံရံတွင်ကပ်သွားပါသည်။ မင်းမဲ့ စရိုက်ဆန်စွာဖျက်​စီးးသွားမှူများကို ဥပဒေနဲ့အညီအ​ရေးယူဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ဆိုင်ရှိ ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်ပြု ပြုပြင်​ရန်​တွက် ဆိုင်အားခေတ္တခဏပိတ် […]
သင်္ကြန်အကျနေ့ မန်းလေး ကျုံးထဲသို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ခုန်ချသေဆုံးမှု….
မန်းလေး ကျုံးထဲသို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ခုန်ချသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ၁၄.၄.၂၀၁၉ ရက် သင်္ကြန်အကျနေ့ နံနက် ၇း၃၉ အချိန်က မန္တလေး ၁၉ လမ်း၆၆လမ်း ကျုံးထဲသို့ စိတ်ကျန်းမာရေးမကောင်းသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးခုန်ချသွားကြောင်းသတင်း ရရှိသဖြင့် မန္တလေးတိုင်း လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နန်းတော်ရှေ့…. လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆယ်ယူ၍ အလောင်းအား တိုင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေး AMBULANCE ဖြင့်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိ။ ဓါတ်ပုံ-မန္တလေးတိုင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ / နန်းတော်ရှေ့အဖွဲ့ unicode မနျးလေး ကြုံးထဲသို့ အမြိုးသမီးတဈဦး ခုနျခသြဆေုံးမှုဖွဈပှား ၁၄.၄.၂၀၁၉ ရကျ သင်ျကွနျအကနြေ့ နံနကျ ရး၃၉ အခြိနျက မန်တလေး ၁၉ လမျး၆၆လမျး ကြုံးထဲသို့ […]
စင်​ကပူ သွားချင်တဲ့ ဘုန်းကြီးနဲ့ ကားဆရာတွေ့သောအခါ…
” ဟဲ့ ဒကာ ကား အားလား ” ” တင်ပါ့ အားတယ် ​ဘုရား ” ” စင်​ကပူ သွားချင်​လို့ ” ” မ​နောက်​ပါနဲ့ ဘုရား ” ” ဟ ဘာ​နောက်​လို့လဲ စင်​ကပူ သွားမယ်​လို့ ​ပြောတာ ” ” တင်းပါ့ ဘုန်းဘုန်းက စင်​ကပူ သွားတာ ဟုတ်​ပါတယ်​။တပည့်​​တော်​က ဘယ်​လမ်းက ​မောင်း​ရ မှာလဲ ဘုရား ” ” ဗိုလ်​ချုပ်​လမ်း တည့်​တည့်​ ​မောင်း ​ရောက်​တယ်​​လေ ကွာ ” ” ဘယ်​ စင်​ကပူကို ​ပြောတာလဲ ဘုရား ” ” ပုဇွန်​​တောင်​က စင်​ကပူ ဘုန်​ကြီး​ကျောင်း ​လေကွာ […]
တောင်းစားနေတဲ့ မန္တလေးက လူုရွှင်တော်ကြီး ဦးတိုင်းကျော်ဟာ ဆင်းရဲသူမဟုတ်..
March 15, 2019 MM Live News
လတ်တစ်လော face book စာမျက် နှာပေါ်မှာ လူပြောများနေတဲ့ မန်းလေးမြို့က ဟာသလူရွှင်တော်ကြီး ဦးတိုင်ကျော် တောင်းရမ်းစားသောက်နေရတဲ့ သတင်း ကြားကြားချင်း မြန်မာနိုင်ငံသဘင်အစည်းအရုံး(ဗဟို)မှ အတွင်ရေးမှု(၁) ဦးဝင်းနောင်နှင့် မန်လေးတိုင်း သဘင်အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင်များ လူရွှင်တော်အသင်း (မန္တလေး)မှ နာယကကြီးများနှင့် အလုပ်အမှုဆောင်များ မှ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် စုံစမ်း မေမြန်းလျက်ရှိပြီး ဦးတိုင်းကျော်၏ ဇနီး ဆိုသူနှင့်သာတွေ့ဆုံရပြီး ဦးတိုင်းကျော် မှာညနေ၅ နာရီခန့်လောက်မှသာပြန်လာမည်ဟုပြောဆိုပါသောကြောင့် ညနေ၅နာရီတွင် သဘင်အစည်းအရုံး အလုပ်အမှုဆောင်များ ထပ်မံသွားရောက် မေးမြန်းစုံစမ်းမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိမျက်မြင်အခြေအနေနှင့် ဦးတိုင်းကျော်၏ ဇနီးဆိုသူ၏ ပြောပြချက်များအရ မန်းလေးမြို့ပေါ်တွင် ဦးတိုင်ကျော်သည် လက်ရှိ ပေ ၄၀×၆၀ ခန့်ရှိသော ခြံဝင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပျဉ်ထောင်အိမ်လေးအပြင် အိမ်တစ်လုံးအားသီးသန့်ဆောက်လုပ်၍ တစ်လ ၁၅၀၀၀ နှင်ငှားရမ်းထားကြောင်း ထို့ကြောင့် fb […]
ပြင်းပြင်းထန်ထန်မီးလောင်ခဲ့သော မန္တလေး ကားဝပ်ရှော့မီးလောင်မှု
February 27, 2019 MM Live News
မကြာခဏဖြစ်ပေါ်တက်တဲ့ ပြည်တွင်း မီးလောင်မှုသတင်းတွေကိုတတော့ အားလုံးလည်း ကြားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မီးဘေးဒုက္ခကြောင့် သေဆုံးသူများစွာနှင့်အတူ ဘဝပျက်ခဲ့ရသူတွေလည်းများစွာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာအားလုံးအသိပဲဖြစ်မှာပါ။ ဒီကနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာလည်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ကြောက်စရာမီးလောင်မှုကြီးတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ အဆိုပါ မီးလောင်မှုကတော့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၆၄လမ်း၊ မင်္ဂလာလမ်းထောင့်အနီးရှိ ကားဝပ်ရှော့မီးလောင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ယင်းမီးလောင်မှုကတော့ ဒီကနေ့ နေ့လည် ၁၀ နာရီ ခွဲလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး မီးသတ်ဌာနနှင့် ကယ်ဆယ်ရေးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ မီးလောင်မှုကြီးကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှုများစွာရှိခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်အထိပ်တလန့်ဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါမီးလောင်မှုကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုပစ္စည်းများစွာရှိခဲ့ပေမယ့် လူသေဆုံးမှုမရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မန္တလေး ၆၄ လမ်းမီးလောင်မှု ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝပေးလိုက်ပါတယ်။ VIDE0 – U MYO AUNG […]
ကနဦးသတင်း..ကားမောင်း မကျွမ်းသေးတဲ့သူက Express ကားကြီးကို တက်မောင်း
January 31, 2019 MM Live
ကားမောင်း မကျွမ်းကျင်တဲ့သူက Express ကားကြီးကို တက်မောင်းတာတဲ့ဗျာ မန္တလေး မဟာမြတ်​မုနိဘုရားနားက ​ညောင်​ကန်​တိုက်​ထဲမှာ Express တစ်​စီး ​​ရေထဲကျကြောင်း ကြားသိရပါသည်။ ကားမောင်း မကျွမ်းကျင်တဲ့သက Express ကားကြီးကို တက်မောင်းတာ ရပ်ထားတဲ့ အခြားကားတွေကိုလည်း အကုန်တိုက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ ရေကန်ထဲထိုးကျသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မောင်း​နေကျယာဉ်​​မောင်းမဟုတ်​တဲ့ မကျွမ်းကျင်​သူတက်​​မောင်း​တော့ ရပ်​ထားတဲ့ကား​တွေဝင်​တိုက်​မိပြီး ​ရေထဲကျသွားတာလို့ ကနဦးသတင်းသိရ..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံးရှုံးမှုကတော့ မနည်းဘူး..။ ယာဉ်မောင်းလည်း တာဝန်ရှိပြီ ဒုက္ခရောက်ရပီပေါ့ဗျာ..။ မကျွမ်းကျင်ပဲ မောင်းတဲ့သူလည်း မမောင်းတတ်မောင်းတတ် စမောင်းခါစဆိုတော့ သူလည်း ကျွမ်းကျင်အောင်ဆိုပြီး ဟိုနား ဒီနား ရွှေ့တာလောက်တော့ ရလောက်ပါတယ်ဆိုပြီး တက်မောင်းတာပဲ ဖြစ်မှာပါ။။ ဒါပေမယ့် အခုလိုဖြစ်သွားတော့ သူလည်း ခံရပြီပေါ့..။ အားလုံးအတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး..။ Aung Kyaw Soe […]
January 30, 2019 MM Live
အံ့သြဖွယ် အစွမ်းတွေနဲ့ ဆိုင်ကယ် စတန့်ပြတဲ့ မန္တလေးသားများရဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင် လူကြည့်များ ဆိုကယ်ဆိုရင် မန္တလေး.. မန္တလေးဆိုရင် ဆိုင်ကယ် လူတိုင်းက တွဲမြင်ထားကြတယ်ဆိုတာ အလိုလိုသိပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်..။ အခုတစ်လော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ လူကြည့်များပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတစ်ခုကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..။ ဒီဗွီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ မန္တလေးသားနှစ်ယောက်လို့ သိရတဲ့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ဆိုင်ကယ်စတန့်စီးပြသွားတာကို အံ့သြဖွယ်ရာ မြင်ကွင်းအဖြစ် တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။ သူတို့ ဆိုင်ကယ်စတန့် စီးပြနေတဲ့ နေရာဟာ လူရှင်း လမ်းရှင်းတဲ့ အချိန်မဟုတ်သလို အခြာသော ယာဉ်များလည်း သွားလာနေကြတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ အတွက် အင်မတန်မှလည်း အန္တရာယ်များလှပါတယ်..။ သို့သော်လည်း သူတို့ဟာ အန္တရယ်ကင်းစွာနဲ့ပဲ ဆိုင်ကယ်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဆီးပြသွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဆိုင်ကယ်နောက်ပိုင်းကို တစ်ယောက်က ထိုင်ပြီး ဆိုင်ကယ်လက်ကိုင်ပေါ်အထိ နောက်တစ်ယောက်က တက်ထိုင်ပြီး စီးပြသွားတာကို […]